श्री स्वस्थानी ब्रतकथाको १६ अाैं भाग वृन्द्राले गुमाइनन् सतित्व - Muldhar Post
श्री स्वस्थानी ब्रतकथाको १६ अाैं भाग वृन्द्राले गुमाइनन् सतित्व
धर्म दर्शन २०७५, २३ माघ बुधबार 278 पटक हेरिएको
हे अगस्त्य मुनि ! मानसरोवरबाट महादेवसित विदा भई जानुभएका विष्णु जालन्धरको भेष लिई अन्तःपुरमा जानुभयो । वृन्दाले पनि जालन्धर रूपधारी विष्णु आएको देखी स्वामी आइपुग्नुभयो भनी ढोकामा आई, पाउ धोइदिएर भित्र कोठामा लगी भन्न लागिन् – ‘हे स्वामी ! पार्वतीलाई छल गर्न भनी जानुभएथ्यो, सो के भयो ? अनि मभन्दा पार्वती कत्तिकी राम्री लाग्यो ?’ वृन्दाको कुरा सुनेर जालन्धररूपी विष्णुले भन्नुभयो – ‘हे वृन्दे ! पार्वतीलाई छल गर्न नसकिने रहेछ । किनकि पार्वतीको घरभित्र जाने ढोकाका द्वारेहरूले को आयो ? कस्तो आयो ? पहिले नै चिन्दा रहेछन् । मैले पनि ती घोरमूर्ति द्वारपाललाई देख्दै डराएर त्यहींबाट नै फर्किएँ ।’ जालन्धर भेषधारी विष्णुको त्यो कुरा सुनेर वृन्दाले शङ्का गरी ‘यी मेरा पति होइनन् । अवश्य नै यो कुनै अर्कोले मलाई छल गर्न आएको हो’ भनी ध्यानदृष्टिले विचार गरेर हेरिन् र ‘विष्णुले जालन्धरको रूप लिई छल गर्न आएको’ प्रष्ट बुझिन् ।
अब मैले कुनै युक्ति गर्नुपर्यो भनी हाउभाउ र कटाक्षद्वारा विष्णुलाई वशमा गराई भन्न लागिन् – ‘हे स्वामी ! म एउटा कुरा भन्छु, तपाईं मान्नुहुन्छ ?’ वृन्दाको कुरा सुनी विष्णुले पनि ‘तिमीले जे भन्छ्यौ, म अवश्य मान्नेछु’ भनी वाचा गर्नुभयो । अनि वृन्दाले ‘म फर्केर नआएसम्म यहीँ बसिरहनुहोला’ भनी ढोका थुनेर आफू अर्कै घरमा गएर बसिरहिन् । वृन्दा आज आउलिन्, भरे आउलिन् भनेर बाटो हेर्दा हेर्दै चारदिन बितेर गए । तैपनि नआउँदा वाचामा हारेका विष्णु विवश भएर त्यो कोठामा बसिरहे । यता कैलाशमा महादेवले विष्णु फर्केर नआएकोले ध्यानदृष्टिले विचार गर्नुभयो र पार्वतीसित ‘हे पार्वती ! वृन्दालाई छल्न जानुभएका विष्णुलाई ता वृन्दाले नै पो छलेर कोठामा थुनी राखेको रहेछ । अब छुटाएर ल्याउँछु’ भनी मायाद्वारा सोह्रवर्ष उमेरको एक अति राम्रो युवावयको भिक्षु सृष्टि गरी ‘वृन्दाले कोठाभित्र थुनेर राखेका विष्णुलाई भिक्षामा मागी ल्याऊ’ भनी आज्ञा भयो ।
महादेवको आज्ञा सुनी ‘हवस्’ भनी विदा भई जालन्धरको भेष लिएका विष्णु वायाँ हातमा त्रिशूल लिई, दाहिने हातले डमरु बजाउँदै अन्तःपुरमा पुग्नुभयो । स्वामी आउनुभयो भन्ने विश्वासमा परेकी वृन्दाले हत्तपत्त गोडा धोई, भित्र लगी आसनमा बसाली, बिन्ती गर्न लागिन् – ‘हे स्वामी ! महादेवसँगको लडाईं के भयो ? के गरेर आउनुभयो ?’ वृन्दाको कुरा सुनी जालन्धररुपी विष्णुले भन्नुभयो – ‘हे प्रिये ! आजै युद्ध कहाँ सकिन्छ ? हारजितको टुङ्गो छैन । युद्धमा साह्रै थाकेको हुनाले विश्राम गर्न आएको हुँ । साह्रै भोक लागेको छ । खानेकुरा ल्याऊ’ यस्तो कुरा सुनी वृन्दाले मीठामीठा खानेकुरा ठीक पारेर खुवाइन् । रातपरेपछि वृन्दासित अनेक तरहका वार्तालाप गरी आफ्ना मायाले छोपी वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराई रात बितेर उज्यालो भएपछि जालन्धरको रूप छोडी शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म लिएका विष्णुले आफ्नो असली रूपको दर्शन दिनुभयो । यो देखी वृन्दा अत्यन्त रिसाएर ‘हे पापिष्ठ विष्णु ! तिमीले छल गरी मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदियौ’ भनिन् । वृन्दाले त्यस्तो भन्नासाथ विष्णुले भन्नुभयो – ‘हे वृन्दा ! महादेवले जालन्धरलाई हिजो नै मारिसक्नुभयो । अब तिमीले मजस्तो वैकुण्ठको मालिकलाई पतिका रूपमा प्राप्त गरिसकेकी छ्यौ, मलाई पाएपछि किन फिक्री गरिरहन्छ्यौ ? तिम्रा पति जालन्धरको मृत्यु भएको खबर केही वेरमा नै आइपुग्नेछ ।’ यसरी विष्णु भगवानले वृन्दालाई सम्झाई बुझाई अनेकौं सान्त्वना दिनुभयो । इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये श्री स्वस्थानी परमेश्वर्याः व्रतकथायां वृन्दायाः पतिव्रताधर्महरणं नाम सप्तदशोऽध्यायः ।।